Ninkii Soomaalida ku Weeraray Dalka Switzerland oo Maydkiisa Laga Helay Meel aan ka Fogeyn Masjika (VIDEO) - Hablaha Media Network
Ninkii Soomaalida ku Weeraray Dalka Switzerland oo Maydkiisa Laga Helay Meel aan ka Fogeyn Masjika (VIDEO)
HMN:- Booliska magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa sheegay inay heleen meydka ninkii toogashada ku dhaawacay saddex qof oo Soomaali ah oo ku jiray masaajid ku yaal magaalada Zurich ee dalka Switzerland.
Afhayeenka booliska ayaa sheegay in ninka falkan gaystay uu ahaa 24-jir u dhashay dalka Switzerland oo la baadi goobayey malamahan, kadib markii uu maalintii Axaddii qof ku dilay agagaarka magaalada Zurich ee dalka Switzerland.
ninkii-soomaalida-ku-weeraray-dalka-switzerland-2Meydkiisa iyo qori dul-saaran ayaa mar dambe lagu arkay buundo masjidka u dhow hoosteeda. Booliisku waxay xaqiijiyeen inuu ahaa ninkii weerarka xalay ka geystay masjidka ay Soomaalida ku tukato.
Booliisku ayaa waxa ay sheegeen in ninkii dableyda ahaa uusan wax xiriir ah la lahayn jihaadka isla markaana aanay fahmin sababta uu u doortay inuu masaajidka weeraro.
Waxana boolisku uu sheegay in ninkani xiligii u dhallinyarada ahaa lagu xukumay xabsi gaaban ka dib dagaal uu galay iyo mootooyin uu dhacay, gurigiisana waxaa markii la baaray laga helay waxyaabo badan oo uu soo xaday.